Falanqeynta kulanka xiisaha iyo xamaasada leh ee Manchester United v Barcelona lugta hore ee Champions League – Walaal24 Newss
Falanqeynta kulanka xiisaha iyo xamaasada leh ee Manchester United v Barcelona lugta hore ee Champions League
April 10, 2019	0	By walaal24
Ole Gunnar Solskjaer ayaa uga digay ciyaartoydiisa Manchester United in Barcelona aysan aheyn hal ciyaaryahan oo kaliya ka dib markii uu xiddiga Barcelona Lionel Messi uqaaday mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee abid ab, ciyaarta oo ka dhici doonto lugta hore Champions League ee Old Trafford.
Iyadoo Messi uu qaab ciyaareed cajiib ah ku dhaliyey, isagoo dhaliyay 43 gool 40 kulan oo uu u saftay Barcelona xilli ciyaareedkan, Solskjaer ayaa si dhaqso ah u tilmaamay inuu kooxda martida u ah inay ku guuleystaan ​​ciyaartoy dhowr ah.
Ciyaaryahankii hore ee Liverpool, Luis Suarez iyo Philippe Coutinho, ayaa soo jiitay Solskjaer, iyadoo ciyaaryahanka reer Uruguay uu dhaliyay 7 gool 9kii kulan ee ugu danbeysay tartamada oo dhan.
“Waa ciyaaryahan fantastik ah, waxaana uu hoos u dhigi doonaa taariikhda kubada cagta mid ka mid ah ciyaartoyda ugu wanaagsan ee abid” ayuu yiri tababaraha Manchester United.
“Way adag tahay in la joojiyo, lakiin marwalba ma ahan mid suurtagal ah, mana ahan sida Messi oo kale oo aan la ciyaareyno Manchester United” – Luis Suarez, Philippe Coutinho, Ivan (Rakitic), Arturo Vidal.
Kulanka oo Caawa soogalaya saacada Geeska Afrika marka ay tahay 10:00 PM Habeenimo oo Caawa ah.
“Waxaa jira ciyaartoy aad uwanaagsan, kaliya ma diirada saareyno hal ciyaaryahan, waan ognahay inaan la ciyaareyno 11 .”
Solskjaer isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay Marcus Rashford inuu taam noqon doono ka dib dhaawac canqowga ah oo ku qasbay inuu weeraryahanku seego guuldaradii 2-1 ee Premier League ka soo gaartay Wolves.
Weeraryahankan ayaa bilaabay tababarkii Talaadadii isagoo shaqeynayay shaqsi kaas oo su’aalo ka keenay ka qaybqaadashadiisa lugta koowaad.
Daafacyada Eric Bailly iyo Antonio Valencia ayaan weli taam aheyn, halka Ander Herrera uusan u badneyn inuu ku soo kabsado waqtigii uu wajihi lahaa Barcelona, ​​lakiin ciyaaryahanka khadka dhexe Nemanja Matic ayaa sidoo kale ka dhigi kara kooxda.
Tani waa kulankii ugu horeeyay ee Champions League ee u dhaxeeya Barcelona iyo Manchester United tan iyo sanadkii 2011, Barcelona ayaa 3-1 ku badisay Wembley.
Manchester United waligeed lagama badin kulan ka tirsanaa Champions League oo ay la ciyaartay Barcelona (W2 D2 L0), taasina waa kulankoodii ugu horeeyay ee dhexmara labada kooxood ee Old Trafford tan iyo lugta labaad ee semi-finalka Champions League 2007-08. Red Devils ..
Manchester United ayaa badisay labo ka mid ah 11-kii kulan ee ugu dambeysay ee Champions League oo ay la ciyaareen W2 D3 L6, iyagoo ku guuldareystay inay badiyaan kulamadoodii quarter-final-ka ee xilli-ciyaareedka 2013-ka ee David Moyes oo ka horyimid Bayern Munich.
Tan iyo markii ay Chelsea ka reebtay Barcelona semi-finalkii 2011-12, kooxda England ayaa laga saaray 10kii kulan ee ugu dambeysay ee 11kii kulan ee ugu danbeysay ee Champions League ee ay ka horyimaadaan kooxaha Isbaanishka, marka laga reebo Leicester City oo ka soo horjeesatay Sevilla 16kii sanno ee ugu danbeysay ee 2016-17.
Lionel Messi ayaa dhaliyey 22 gool oo Champions League ah 30 kulan oo uu ka horyimid kooxo Ingiriis ah – in ka badan ciyaaryahan kale oo taariikhda tartanka ku jira.
Lionel Messi ayaa ku guuldareystay inuu shabaqa soo taabto mid ka mid ah 11kii kulan ee ugu danbeysay ee uu u saftay Barcelona. tan iyo markii uu ka soo horjeeday PSG bishii April 2013, xiddiga reer Argentine ayaa isku dayay 49 darbo isagoo aan ku guuleysan xilli ciyaareedkan tartankaan.
Kulankan oo Caawa Arbaco ah oo aan ku faraxsanahay. Man Utd ayaa ku jirta garab la’aan. Waxaa jira calaamado su’aal ah oo ku saabsan haddii Ole uu yahay ninka saxda ah – hadda waa inuu qandaraas ku qaatay.
Ma waxay doonayaan inay ka takhalusaan ciyaartoydaan? Waxaa jira waxoogaa dareen xun oo ku saabsan booska mar kale. Barcelona waa ay ku dhici kartaa, Luke Shaw ayaana ah inuu si adag u ciyaaro Messi. Waa go’aanka weyn ee Solskjaer sida ay jecel yihiin in ay weeraraan.
Suarez ayaa doonaya inuu dib ugu soo laabto Old Trafford, Messi ayaana ah ciyaaryahanka ugu fiican weligiis. Coutinho ayaa laga yaabaa inuu ku jiro, ka dibna Arturo Vidal, Rakitic iyo Busquets ayaa ah xiddigaha Messi iyo Suarez. Rashford ayaa fure u ah Man Utd iyadoo la raacayo xawaaraha iyo dhaqdhaqaaqiisa.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federalka Soomaaliya oo la kulmay Madaxda Bangiga Adduunka
Falanqeynta Hordhaca kulanka Xiisaha leh ee Kooxaha Ajax vs Juventus lugta hore ee Champions League
Maamulka Puntland oo ka horyimid xeerka Doorashooyinka ay ansixiyeen Golaha Wasiirda
Dalalaka Itoobiya, Masar iyo Suudaan oo ka wada hadlaya arinta Wabiga Niil
Daawo: Madaxweyne Farmajo oo Kormeeray Dugsiga Tababarka Janaraal Gordon kuna sugan Gutada 14 Oktobar
Qaramada Midoobay oo ku dhowaaqday dhaqaale ay ku bixineyso nabadda Soomaaliya
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray magaalada Kampala
Weerar lagu qaaday masaajidka Reben Park oo ku yaala bartamaha magaalada London
Istaraatiijiyadda Maraykanka ee Afrika mid Diblomaasiyadda, Horumarinta, iyo Difaaca
Daawo: Wasiir Beyle “canshur la kordhiyey ma jirto, Dadka hadan canshurta iska bixinin Dowlad ma jireyso, wadana ma jiraayo”
Daawo: Madaxweyne Muuse Biixi oo kormer ku tagay Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda ee Mamulka Somaliland
Daawo: Madaxweyne Farmaajo oo hambalyo u diray munasabada Ciidul fitriga dhamaan umada Musliminta gar ahaan Soomaalida meel kast ay joogaan